အချစ်ဆိုတာဘာလဲ? | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ | မတ်ေတာ, လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဆက်ဆံရေး အချစ်ဆိုတာဘာလဲ?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သူတစ်ပါးကိုချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ချစ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ ပြည့်စုံမှု၊ ပြုစုပျိုးထောင်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ရှင်သန်မှု၊ ဖန်တီးမှု၊ ကဗျာဆရာများ၊ ဂီတသမားများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများနှင့်ဘာသာရေးပညာရှင်များကိုနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကားအဘယ်နည်း။ ဒီမှာပျော်စရာကောင်းတယ် ကာတွန်းဗီဒီယိုက ဒါကအရေးယူပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြတယ်။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးအတွက်အခြေခံအကျဆုံးစိတ်ခံစားမှုအင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ်အမျက်ဒေါသ, မကျေနပ်မှု, ငြူစူသောစိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုး၌ထပြသပေးသောကွောကျရှံ့ခွငျးဖွစျသညျ။
သာ. ချစ်ကိုရှာ, တကယ့်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ချစ်ခြင်းသိရန်ကူညီပေးသည်, Bond ၏သဘောသီးခြားနှစ်ခုတို့ကထုတ်လုပ်နေကြပြီး, ဒါပေမယ့်ဦးနှောက်ထဲမှာစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်။ ကျနော်တို့မိတ်ဆွေတစ်ဦးမှကပ်လျက်တည်ရှိပေမယ့်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒရှိသည်မဟုတ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပ်လျက်တည်ရှိခံစားခြင်းမရှိဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုများအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒရှိနိုင်ပါသည်။ အလိုဆန္ဒနှင့် Bond နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးကကျန်းမာချိန်ခွင်လျှာရေရှည်မင်္ဂလာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝဆုလာဘ်ဖြစ်ကြသည်။
သဘာဝသို့မဟုတ်မူလတန်းဆုလာဘ်အစားအစာ, ရေ, လိင်, မတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်အသစ်အဆန်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သန်နှင့်ရှင်သန်ကြကုန်အံ့။ ဤအဆုလာဘ်၏ရှာဟာ neurochemical dopamine မှတဆင့်အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်များကသွေးဆောင်သည်။ သဘာဝဆုလာဘ်ကိုမစားမသောက်, procreating နှင့်ပျိုးထောင်ခံရသောအခါအပျြောအပါးတစ်ဦးခံစားချက်ပေးပါ။ ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ချင်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပျြောမှေ့စခံစားချက်တွေကိုအပြုအမူအားကောင်းလာစေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်နာကျင်မှု, ရွေ့အထူးသဖြင့်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုပယ်တတ်၏။ ဒါကကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူပုံဖြစ်ပါသည်။ ဤအအပြုအမူတွေကိုတစ်ခုချင်းစီမျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုဘို့လိုအပ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းအနှောင်အဖွဲ့ touch နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘဲ, အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည်ငါတို့အစာစားချင်စိတ်ယူအမြတ်ထုတ်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကာလအတွင်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအများကြီးစားသုံးပင်စိတ်ကျရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်နိုင်ပါတယ် စှဲမွဲမှု တချို့လူတွေအတွက်။ ရေရှည်တည်တံ့ကိုချစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်သာယာဝပြောရေးဖို့အရေးကြီးသည်။
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားရပါစေသောအဓိက neurochemicals ၏ function ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပထမဦးဆုံးနမ်းသတိမရကြသလော